Ama-tattoos e-Motocross abathandi balo mdlalo: imibono nezincazelo | Ukuzidweba umzimba
Ama-tattoos e-Motocross abathandi balo mdlalo: imibono nezincazelo
Ama-tattoos e-Motocross asekelwe emdlalweni owaziwa kancane emhlabeni wonke, kodwa ethandwa kakhulu eningizimu yeYurophu nase-United Kingdom (okuyiqiniso lapho ivela khona), ngalokho ama-protagonists ayo azoba yizithuthuthu, amasudi aqinile kanye nodaka oluvame ukutholakala emgwaqeni.
Nakuba ama-tattoos e-motocross engenawo incazelo ekhethekile, aseyindlela engcono kakhulu yokubonisa uthando lwakho ngalo mdlalo oshubile.Ngakho-ke, ngaphezu kokukhuluma kafushane ngomlando wayo, sizokunikeza imibono eminingi ukuze uthole umklamo ofaneleka kakhulu wena nobuntu bakho. Futhi uma ufuna okwengeziwe, bheka lesi esinye isihloko mayelana ama-tattoos wesithuthuthu, abathandi bamasondo amabili!
1 Umlando omncane
2 Imibono ye-Motocross tattoo
2.1 Amabhayisikili e-Motocross
2.2 Abashayeli bezindiza abadumile
2.4 Izigcawu ezinomthelela
2.5 Ama-tattoos e-Motocross anenhliziyo
2.6 I-Throttle Tattoo
2.7 Umklamo wombala ojabulisayo
3 Ungayisebenzisa kanjani ngokunenzuzo ama-tattoos e-motocross?
4 Izithombe ze-tattoo ze-Motocross
I-Motocross, njengoba sishilo, yadabuka e-United Kingdom, lapho imijaho yokuqala yaqala khona ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX. Lokhu kwakuhlanganisa ukufinyelela umgomo kuqala, kodwa ngemva kokuphasa uchungechunge lwezivivinyo, ngakho kuba nokulinganisela phakathi kwekhono lokuzinqoba nokufinyelela umgomo kuqala. Igama elithi motocross liyingxube phakathi kwesithuthuthu, 'isithuthuthu' kanye nezwe elinqamula izwe, 'ukuvakasha'.
Lo mdlalo waba nokuqhuma kokuqala kokuthandwa ngawo-30, lapho uqala ukuthatha i-UK ngesiphepho. Amabhayisikili e-Motocross ngaleso sikhathi ayehluke kakhulu kumabhayisikili asemgwaqweni futhi empeleni babengamavulandlela ekuhlanganiseni izakhi ezithile ngaphambi kwalezi zakamuva, njengokumiswa. Futhi ngokumangalisayo, nakuba kuwumdlalo othandwa kakhulu eYurophu, kuwo wonke ama-70s nama-90s abakhiqizi abaphezulu bezithuthuthu zalesi sitayela kwakungamaJapane afana ne-Honda noma i-Suzuki.
Okwamanje, i-motocross wumdlalo othandwa kakhulu onemiqhudelwano eyahlukene, kanye nezitayela ezahlukene, njengeFreestyle noma iSuperMoto, futhi eseze yashintsha yaba ezinye izindlela zokujabulela lo mdlalo, njengakumapheliyade avaliwe.
Imibono ye-Motocross tattoo
Ngokulandelayo sizokunikeza imibono eminingi ukuze uthole i-tattoo yakho ye-motocross efanelekile futhi ungabonisa uthando lwakho lwalo mdlalo ngakho konke ukuziqhenya kwakho.
Okokuqala, futhi njengoba kubonakala, ama-tattoos e-motocross anendlovukazi enkulu, isithuthuthu, ngoba ngaphandle kwalo lo mdlalo ubungeke ukwazi. Njenge-tattoo, sinamathuba amaningi, njengoba kunamamodeli noma ukuba nawo. Uma ufuna ukunikeza ukubaluleka kumodeli, ungakhetha umklamo onemininingwane eminingi ngangokunokwenzeka.
Abashayeli bezindiza abadumile
Kunezikhathi kwezemidlalo ezikwenza ube namaqhubu, nabantu abakwenza uqhaqhazele ngentokozo. Amaqhawe esimanje, anqoba zonke izithiyo ukuze abe amakhosi emidlalo yawo, avuse ukuthakaselwa yonke indawo. Kungenzeka ukuthi kungani ama-tattoos omshayeli ethandwa kakhulu. Ukuzisebenzisa ngokunenzuzo, bheka yonke imininingwane engakwazi ukuhlonza isithombe sakho, hhayi isithuthuthu kuphela, kodwa futhi ne-jumpsuit, isigqoko sokuzivikela, ezinye izici ze-acrobatics ...
Esinye sezici ezihluke kakhulu zalo mdlalo isigqoko sokuzivikela, yingakho nazo zingenye yezikhuthazo ezidume kakhulu kuma-tattoos e-motocross. Umklamo ungaba lula, ngisho nokuthinta kwendabuko, ngemigqa ewugqinsi noma ngombala. Ngakolunye uhlangothi, kuwumqondo omuhle ukukhetha umklamo ongokoqobo, lapho ungabonisa khona ingxenye yesigcawu engilazini ye-visor.
Futhi ukukhuluma ngezigcawu, Zingenye yezinto ezivame kakhulu ongadonsa kuzo ugqozi kuma-tattoos e-motocross. Kulokhu, umklamo ongokoqobo cishe ukhethwa njalo, unemininingwane eminingi ngangokunokwenzeka, futhi ngombala omnyama nomhlophe ukuwunikeza ukuthinta kwedrama. Uhlobo lwezigcawu lungabonisa lokho okuthanda kakhulu ngalo mdlalo othokozisayo nge-pirouette yesitayela samahhala noma okuthile lapho umlingiswa oyinhloko eyisithuthuthu kanye nezwe elinzima nelinzima.
Ama-tattoos e-Motocross anenhliziyo
Ngakolunye uhlangothi, Labo abakhetha i-tattoo yesitayela esilula ngeke babe yinkimbinkimbi kakhulu ukufeza umklamo opholile futhi ohlakaniphile ngesikhathi esifanayo.. Isibonelo, ungasebenzisa kuphela iphrofayili yesithuthuthu egxuma ngenhliziyo ngemuva (amaphuzu amaphuzu uma ibomvu noma omunye umbala), noma uyihlanganise ne-EKG ukukhombisa ukuthi inhliziyo yakho ishaya ngesilinganiso sokusheshisa.
Impela ingelinye lama-tattoos ahlaba umxhwele kakhulu futhi asekuqaleni owake wawabona esikhathini eside, futhi ngaphezu kwakho konke, alungele abalandeli bezithuthuthu kanye ne-motocross. Kumayelana nokudweba umcibisholo esandleni sokudla, lowo we-accelerator, ohambisana ne-onomatopoeia yokusheshisa. Uma ufuna ukuyenza ibe yomuntu siqu nakakhulu, cela umdwebi we-tattoo ukuthi enze umcibisholo ngezinyathelo odakeni lwesithuthuthu osithandayo.
Umklamo wombala ojabulisayo
Ama-tattoos e-Motocross nawo angaba mnandi futhi angabi nje amaqiniso futhi amnyama namhlophe.Ngokuphambene nalokho, ungakhetha ukwakheka okungajwayelekile okubukeka kukuhle ngendlela efanayo. Isitayela se-cartoon, kulolu hlobo lwecala, yisona esibonakala singcono kakhulu, ngoba sivumela ukuthi sihlanganiswe nemibala ekhanyayo, kanye nesitayela sokudweba esishukumisayo.
Ungayisebenzisa kanjani ngokunenzuzo ama-tattoos e-motocross?
Sesikubonile lokho Lolu hlobo lwama-tattoos lupholile kakhulu futhi lulungele labo abathanda ngalo mdlalo othakazelisayo. Kodwa-ke, uma kuziwa ekudwebeni ugqozi kusuka kumklamo wokugcina, singenza kahle ukugcina lokhu okulandelayo engqondweni:
Kubalulekile ukunquma kusenesikhathi ngesitayela esisodwa noma esinye. Nakuba kuvame kakhulu ukukhetha umklamo ongokoqobo futhi okumnyama nokumhlophe ukukhombisa imizwa nobungozi balo mdlalo, singakhetha okuthile okuhluke kakhulu uma esikufunayo kuwukugqamisa ubumnandi esibuzwa ngamasondo amabili.
Kunoma yikuphi, Into esemqoka ukukhetha umdwebi we-tattoo onguchwepheshe kulezi zinhlobo zemiklamo.Ikakhulukazi uma sinqume umklamo ongokoqobo, ngoba konke kungonakalisa ngokubulawa okubi.
Ama-tattoos e-Motocross adlule ayiqiniso, njengoba ukwazile ukubona kuso sonke lesi sihloko. Sitshele, ingabe unawo ama-tattoos akhuthazwe yilo mdlalo? Iluhlobo luni? Kungani unqume ukukwenza?
Izithombe ze-tattoo ze-Motocross
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » Izinto nezinto ezidwetshwe emzimbeni » Ama-tattoos e-Motocross abathandi balo mdlalo: imibono nezincazelo
Ama-tattoo e-DNA: akushoyo kanye nemibono yokukukhuthaza